I-NET 5 iza nokusekelwa kweLinux neWebAssembly | Kusuka kuLinux
I-NET 5 iza nokuxhaswa kweLinux neWebAssembly
IMicrosoft ivuliwe muva nje ngokuthunyelwe kubhulogi, kukhishwa ifayili le- inguqulo entsha enkulu yesikhulumi se-NET 5 yini enikezayo ukusekelwa kweLinux, MacOS, neWebAssembly.
INethiwekhi 5 inikezela abasebenzisi ngohlaka olulodwa oluvulekile nesikhathi sokusebenza lokho kungasetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene zentuthuko nakuzingxenyekazi ezahlukahlukene. Uhlobo I-NET 5 yakhiwe ukuhlanganiswa kohlaka lwe- .NET, .NET Core neMono. Nge- .NET 5, ungadala izinhlelo zokusebenza ezinqamulelayo usebenzisa isisekelo sekhodi esisodwa nenqubo yokugunyaza ejwayelekile, kungakhathalekile uhlobo lohlelo.
Umkhiqizo I-NET 5 iqhubeke nokuthuthuka kwephrojekthi yomthombo ovulekile .I-NET Core 3.0 futhi esikhundleni salo kwafakwa i-classic .NET Framework, engeke isakhiwa yodwa futhi izomiswa lapho kukhishwa i-.NET Framework 4.8. Yonke intuthuko ihlobene ne-
I-NET manje igxile kuphrojekthi ye-NET Core kufaka phakathi i-Runtime, JIT, AOT, GC, BCL (I-Base Class Library), C #, VB.NET, F #, ASP.NET, Uhlaka Lwebhizinisi, ML.NET, WinForms, WPF, neXamarin. Kuhlobo olulandelayo lwe- .NET 6, amaphrojekthi weXamarin neMono azofakwa ukuxhasa amapulatifomu e-iOS ne-Android.
Njenge-NET Core, Imikhumbi ye-NET 5 enesikhathi sokusebenza seCoreCLR esine-RyuJIT JIT compiler, imitapo yolwazi ejwayelekile, iCoreFX, iWPF, Amafomu e-Windows, i-WinUI, i-Entity Framework, i-dotnet command line interface, izinhlaka zokuthuthukisa izinhlelo zamakhasimende ze-WPF ne-Windows Forms kanye namathuluzi wokwenza ama-microservices, imitapo yolwazi, i-server, graphical kanye ne-console.
INET 5.0 inguqulo yokuqala yohambo lwethu lokuhlanganisa i-NET. Sidale i-NET 5.0 ukuvumela iqembu elikhudlwana labathuthukisi ukuthi bathuthe ikhodi yabo nezinhlelo zokusebenza zisuka ku-.NET Framework ziye ku-NET 5.0. Senze nomsebenzi omningi wokuqala ngo-5.0 ukuze abathuthukisi beXamarin bakwazi ukusebenzisa ipulatifomu ebumbene yeNET lapho sikhipha i-NET 6.0. Kukhona okuningi ekuhlanganiseni .NET ngokuhamba kwesikhathi kokuthunyelwe.
Manje yisikhathi esihle sokuqhakambisa ukusebenzisana okumangalisayo nawo wonke umuntu ofaka isandla kuphrojekthi ye-NET. Lokhu kukhishwa kuphawula ukukhishwa kwesihlanu okukhulu kwe- .NET njengephrojekthi yomthombo ovulekile. Namuhla, kunenhlanganisela enkulu yabantu nezinkampani ezincane nezinkulu (kufaka phakathi abaxhasi bezinkampani zeNET Foundation) abasebenza ndawonye njengomphakathi omkhulu ezintweni ezahlukahlukene zeNET enhlanganweni yamachashaza kwiGitHub. Ukuthuthuka kwe- .NET 5.0 kungumphumela wabantu abaningi, imizamo yabo, imibono ehlakaniphile, nokunakekelwa kwabo nothando lwendawokazi, konke okungale kokuqondiswa yiMicrosoft kwephrojekthi. Kusuka ethimbeni eliyisisekelo elisebenza ku-.
Ngaphezu kokuhlanganiswa I-JIT, inguqulo entsha inikeza i-LLVM based preompile mode Kwikhodi yomshini weWebAssembly ne-bytecode (iMono AOT neBlazor kusetshenziselwa i-static).
Ukusebenza yezingxenye ezahlukahlukene zepulatifomu nezomtapo wolwazis lenyuke kakhulu (ikakhulukazi kusheshiswa i-serialization ye-JSON, i-regex, nokusebenza kwe-HttpClient).
Ukuphendula kuthuthukisiwe ngokuvuselela oqoqa udoti. Iklayenti elihlanganisiwe le-ClickOnce lokushicilela uhlelo lokusebenza olusheshayo. Okwe-Linux ne-macOS, i-API System.DirectoryServices.
Amaphrothokholi aguqulelwe ukusebenza ne-LDAP ne-Active Directory. KwiLinux, ukusekelwa kufakiwe futhi kuzinhlelo zokusebenza zefayela elilodwa, lapho zonke izinto nokuncike kufakwa kufayela elilodwa.
Isitaki sokwenza izicelo zewebhu ze-ASP.NET Core 5.0 no-ORM Entity Framework Core 5.0 ungqimba (abashayeli, kufaka phakathi i-SQLite ne-PostgreSQL) bakhishwe ngokwehlukana, kanye nezinguqulo zolimi C # 9 no-F # 5. C # 9 ifaka phakathi ukusekelwa kwama-generator ekhodi yomthombo, izinhlelo ezisezingeni eliphezulu, izifanekiso ezintsha, nohlobo lwesigaba sokubhalisa.
Ukusekelwa kwe- .NET 5.0 no-C # 9 sekuvele kufakiwe kusihleli samahhala sekhodi ye-Visual Studio.
Ekugcineni, Uma ufuna ukwazi kabanzi ngesimemezelo se- .NET 5, ungabheka imininingwane kufayela le- isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » I-NET 5 iza nokuxhaswa kweLinux neWebAssembly
Izigidi zamadivayisi we-Android ngeke zisekele izitifiketi ze-Let Encrypt ngo-2021